I-Loft On Main - I-Airbnb
I-Loft On Main
Woza ujabulele okuhlangenwe nakho kwehhotela le-boutique eliyingqayizivele kule ndawo ebukekayo, ekhanyiswe yilanga, enefenisha enhle, "yobuciko", yesimanjemanje, efulethini eliphezulu elise-Historic Downtown Washington. Amawindi amakhulu abheke Umgwaqo Omkhulu osanda kulungiswa enhliziyweni yesifunda sokuzijabulisa nezobuciko lapho ungajabulela khona ukuthenga nokudla okusezingeni lomhlaba. Kunezitolo eziningi ezintsha nezindawo zokudlela ezivuliwe!
I-Loft On Main yindlu yayo etholakala ngaphezu kwe-Secret Garden Boutique kanye negalari. Ukufinyelela okuyimfihlo okungu-100%.
Ifakwe i-wi-fi, umbhede olingana nendlovukazi, usofa opholile, i-TV, ikhishi elihlome ngokuphelele elinazo zonke izitsha, umenzi wekhofi, isiqandisi/isiqandisi esiwusayizi ogcwele kanye ne-microwave. Ikhofi yokuthopha, itiye namanzi. Itafula lokudlela elikhulu kanye nendawo yokusebenza ehlukene ekhanyiswe yilanga enetafula elikhulu lakudala. Igumbi lokugezela eligcwele elineshawa. Amathawula, insipho, ishampoo, okokugcoba nawo wonke amalineni anikeziwe. Indawo yokungena eseceleni komgwaqo enezitebhisi eziya emnyango wangasese, eduze komnyango we-Turnage Theatre.
4.96 · 263 okushiwo abanye
I-Loft On Main izungezwe uxhaxha lwamabhizinisi amancane akhethekile', okuhlanganisa amabhikawozi amangalisayo nezitolo zekhofi, kanye nezindawo eziningi zokudlela ezinhle, kusukela ekudleni okuhle kuya ekuthengeni. Kunezitolo eziningi nezimakethe ze-eclectic kusuka kwezingubo kuya kwezobuciko kanye nobuciko obuhle. I-Washington yomlando isiphenduke isizinda semibukiso yobuciko, ikhombisa abaculi abaningi basendaweni abanekhono. Hamba ibhulokhi eyodwa noma amabili kunoma iyiphi indlela ukuze ujabulele umgwaqo ongasemanzini, ukuvakasha komlando, iRailroad Museum, iNorth Carolina Estuarium, noma uqashe amabhayisikili, inqola yegalofu, i-kayak, isikebhe noma isikebhe. Amabhulokhi ambalwa kuphela erempu yezikebhe zomphakathi, amadokhu edolobha kanye ne-Marina. Idrayivu emfushane eya emapaki kahulumeni kanye nezindawo ezivelele zokubuka izilwane zasendle zikazwelonke.
Sicela usithinte nganoma yimiphi imibuzo.
U-Kevin Hardy, ongowokuzalwa e-Washington, kanye nonkosikazi wakhe u-Laura, udokotela ohlinzayo onelayisensi, bahlala futhi basebenza eduze. U-Barbara Hardy nomyeni wakhe u-Bob Ray bangozakwethu kulokhu kuqashwa (Kuyibhizinisi lomndeni). Bonke bangababungazi abamukelekayo nabanobungane abanolwazi olujulile ngendawo futhi abajabulela ukukusiza ukwenza ukuhlala kwakho kube ngcono kakhulu!
U-Kevin Hardy, ongowokuzalwa e-Washington, kanye nonkosikazi wakhe u-Laura, udokotela ohlinzayo onelayisensi, bahlala futhi basebenza eduze. U-Barbara H…